Can Xians Have Fun? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Christian a ma noqdo macnaheedu dhamaadka of my xiiso leh? Taasi waa su'aal xiiso leh iyo waxaan u malaynayaa mid cadaalad ah si aad u weydiiso. Waxaa jira sawir ah qaar ka mid ah diinta kiristaanka ah in uu inta badan rinji. Marka ay dadku ka fekeraan Masiixiyada ay ka fekeraan dhammaan waxyaabaha kala duwan. Qaar ayaa u malaynaya inay qayliyaan wacdiya TV, dad kale ayaa aaminsan nin caddaan ku joog ama jir ayeeyo madow ee hat a kaniisad weyn. Qaar ka mid ah u malaynayaa in xisbiga Konserfatifku siyaasadeed ama dadka kuwa aan jeclaan sayniska. Laakiin dad aad u yar oo u malaynayaa in diinta kiristaanka iyo qabaa: hey, in uu noqon doono wax madaadalo ah la samayn! Noqoshada Christian ah uma muuqato xiiso leh inay dadka.
Masiixiyada helay sumcad sida killjoy a. Waa wax loogu talo galay dadka caajis iyo dadka waayeelka ah. Mid ka mid ah heesaa ee song ah ayaa sheegay in, "Haddii aad cabsi, markaas aadaa kaniisadda ". kaniisadaha muuqata Christian waxaa loogu dhiiran, punks cabsi. Dadka qabaa inuu noqdo Christian ah macnaheedu waa in aad u leeyihiin in ay xirtaan, dacwana iyo dharka dheer, iyo muusiko dhegayso Christian xun, iyo joojiso qabow. First of dhan, qaar ka mid ah y'all ee aan ku qaboojiyo in meesha ugu horeysa, laakiin taasi waa sheeko kale.
Waxaan daawaday this wareysi Rule Ja shalay. Waxa uu ka hadlayaa waayo-aragnimada uu la kaniisadaha. In khibrad kaniisadaha had sheegay yimaado sida aad tahay, laakiin waxa ay la micno. Waxa uu marna dareemay soo dhaweyn. Oo markii dadkii weydiiyay hadii uu aqbalo Masiixa naftiisa galay, wuxuu sheegay in uu diyaar u ma ahaa. Waxa uu u maleeyay in loogu tala galay, wuxuu ahaa mid si aad u diiwaan injiilka hadda. Sawirka in uu la siiyey Masiixiga ahaa mid meesha aad ku lahaa in la beddelo wax walba oo adiga kugu saabsan; waxaad lahaa in ay joojiyaan wax kasta oo ku riyaaqayaa aad la riyaaqayaa. Sida haddii noqday Christian a waa wax la soo dhaafay oo aad samayn lahaa haddii aad rabtay in aad naftaada ku raaxaysan!
Waa maxay Fun?
Halkan sida xiiso leh waxaa lagu qeexaa in qaamuuska. Fun waa: Ilo A of raaxo, dheeldheel, ama ku farxaa. Waxaa su'aal ku jirin in uu noqday Christian ah waxay ka dhigan tahay fahamkaaga iyo waayo-aragnimo ee Raaxo, dheeldheel, oo waxaan jeclahay oo bedeli doona. Haddii aad u yaabsan haddii ay isku mid joogi kartaa, ma awoodo. Shaki kuma jiro in uu noqday Christian a beddelo sida aad nolosha u arkaan.
Su'aashu waxay tahay: u caawiyo ama waxyeelo xiiso leh? Ma Masiixiyada cadowga ee Raaxo, dheeldheel, iyo raaxaysi? Ama ma waxaa kaa caawinaya in aad la kulanto Raaxo, dheeldheel, oo waxaan jeclahay in ay dareen run ah? Miyuu qof kasta oo dhaqankeena xaq u helay? Ma Masiixiyada oo xiiso on darafyadiisa ka soo horjeeda ee ku spectrum?
Waxaan qabaa in mid ka mid ah sababaha ay dadku ka hadlayaan Masiixiyada sidan yahay, sababtoo ah sida dadka Masiixiyiinta ah ee waxaa lagu taswiiray warbaahinta. Kasta oo nin Christian in movie ama TV show a yahay kii ugu xumaa. Waxay caadi ahaan xukun iyo corny tahay. Dadka cadaalad caricature badan oo masiixiyiin ah oo la siiyo alaabta ugu doqonimo dareenka.
Sababta labaad waxaa ugu wacan qaar ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah iyo kuwa Nasaara siin off Vibe in. Waxay gacan ka hafray ah. Qaar ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah run ahaantii ma ku raaxaysan wax oo waxay ku eedayn on Ilaah, sida haddii ay canaano.
Sidaas waxa samayn Waxaan qabaa? Waxaan haystaa laba jawaabo su'aasha ah ee caawa. Christian a ma noqdo macnaheedu dhamaadka of my xiiso leh? jawaab My koowaad waa: No
waxaan. No - Noqoshada Christian a Ma Dhigan End of Your Fun
Haddii aad si dhab ah u maleynayaa in ku saabsan, waa su'aal cajiib ah si aad u weydiiso. "Christian a ma noqdo macnaheedu dhamaadka Raaxo, dheeldheel, oo waxaan jeclahay in aan nolosha?"Waxa uu leeyahay wax ku saabsan Ilaah si aad u weydiiso su'aal ah in. Haddii isagoo hab Christian Ilaah soo socda laga helo rumaysadka Masiixa, ka dibna si garano su'aasha waxa uu weydiinaya: Ma Ilaah doonayso inaad nolosha un-raaxo ah? Si haa jawaabi ayaa sheegay in wax run ahayn isaga ku saabsan. Waxa uu abuura oo dhan nolosha. Dabcan waxa uu doonayaa in aad ku raaxaysan nolosha in uu abuuray.
Waa sida weydiinaya haddii Jay-Z ama Kendrick Lamar aad doonaya inuu album cusub neceb. Ma wuxuu doonayaa in aad kaliya la taqsiiraa oo u neceb? Ama sida Steven Spielberg doonayay aad uu movie in neceb, ama uu doonayo in aad casaysanayaa maxaa yeelay, waxaad u nebcaaday Lincoln aad u badan. Waa hagaag, dabcan ma! Waxay u sameeyey, in qayb ka mid, si dadka kale ay u raaxaysan lahaa.
Life waa ka duwan yahay, sababtoo ah waa kaliya ma ahan nooc ka mid ah madadaalada, laakiin waxaa jira egyihiin. Waxa aan ka ogahay xagga Kitaabka waa in Ilaah waa Ilaah oo wanaagsan. Wuxuu u abuuray Eebe nolosha. Waxa uu na isaga araggiisa ka abuuran oo uu na doonayo inuu buuxa ku noolaan nolol in. Waxa uu na doonayo in ay helaan nolol iyo isaga ku ammaani doonaa, waayo,.
Ma jiraan wax in Kitaabka Quduuska ah in soo jeedisay in Ilaah ma na doonayaan in ay ku raaxaystaan ​​nolosheena waa. Marka aad akhriyi Kitaabka Quduuska ah in kaliya ma sawirka aad ku socoto si aad u hesho. Jidka Dadku waxay ka hadlaan Masiixiyada aad u malaynayso lahaa waxaa jiray aayadda a meeshii Ciise ayaa sheegay in, "Haddii aad i soo raac, waa in aad ugu gataan,, wax kasta oo neceb, iyo hoos u jiidi dadka kale ee kula. "Laakiin aad ma si aad u hesho Aayado la mid ah in.
Halkii aad ka heli doonaa Ilaah noo doonaya in ay ku raaxaystaan ​​nolosheena. Waxaan doonayaa inaan akhriyo laba marinnada si aan u malaynayaa in this dhibic.
Dadka qabaa Ilaah oo doonaya inay na ilaaliyaan wax wanaagsan, laakiin taasi waa been. Dhegayso James 1:16-17.
Yaan laydin khiyaanayn, walaalahayga aan jeclahayow. Hadiyad kasta oo wanaagsan iyo hibo kasta oo kaamil ah kor, xagga Aabbaha ka mid ah nalalka degaysa agtiisa kuwaad kula ballanteen ma jiro kala duwanaansho ama hooskii ay sabab u tahay isbedelka. (James 1:16-17)
Ilaah ma isku day in aadan na ilaaliyo wax wanaagsan; Ilaah waa ku nooleyn wax kasta oo wanaagsanu. Waxa uu isha. Taasi waa sida caruurta ee caruurta agoonta ah weydiinaya haddii dadka bixiso ay hoy iyo dhar rabto wax iyaga aawadood wanaag. Waxay bixisay wax walba si maxaad uga jeeddaa? Waa su'aal aan caqli gal ahayn.
Ilaah wuxuu abuuray saaxiibtinimo iyo guurka. Ilaah wuxuu abuuray dhoola iyo qosol. Kuwani waa dhan hadiyado Ilaah ka yimid. Sidaas si ay u dhaqmaan sida uusan dooneynin na si ay u raaxaysan waa doqonimo.
Maxaa ku saabsan Ciise? Ma wuxuu wax odhan lahayd oo ku saabsan this? In John 10, Ciise laftiisa duwan macallimiin been ah. Kuwani macallimiin been ah u horseedi dadka baadi; waxay jiray adhijirro bannaanka xun. Ciise ayaa u ku baaqay in tuugo.
"Tuuggu wax kale yimaado inuu wax xado, dilaan, oo ay baabbi'iyaan. Aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan, oo ay badnaan u haystaan. " (John 10:10)
Tani waxay si toos ah uu ka hor waxa ay dadku inta badan odhan dhaqankeena. Waxay u malaynaysaa in Ilaah uu doonayo in uu wax xado. Xadina farxaddiinnu, farxad, iyo doonista xorta ah. Taasi Ilaah doonayo inuu ina dilo, oo waxay inoogu jiidi. Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi, Wuxuu u yimid in la siiyo waa nolosha badan ama nolol buuxda. Waxa uu na uu doonayo in uu ku nool nolosheena si buuxda u. Waxaan ka hadli doonaa badan oo ku saabsan in ka dib.
In Sabuurradii 16, David waxa uu ka hadlayaa in ay Ilaah iyo halkan waxa uu sheegay in.
"Aad i tustay jidka nolosha; hortiinna waxaa farxad baa ka buuxda; gacantaada midigna nimco baa weligood ka badan. " (Sabuurradii 16:11)
Sidaas socda oo u dhaw in Ilaah ma keeni murugo caajiso, waxay keenaysaa in farxad. Ma aha oo kaliya farxad cayn kastoo laakiin ka buuxda farxad. Oo nimco baa ku jirta. Ma shan daqiiqo ama shan sano raaxaysi, laakiin raaxaysata weligeedba.
Waxaan tegi karin on maalmo la marinnada sida tan. Masiixiyaddu maaha cadowga Raaxo, dheeldheel, iyo raaxaysi. Waa dhab wadada si raaxo run, dheeldheel, iyo raaxaysi.
todobaadkii hore, aniga iyo xaaskeyga waan u tegey si ay u arkaan in cuf 3D IMAX. Aad u ogaato waxay ku siin kuwan koob clunky weyn inuu xidho. Laakiin waxa haddii halkii koob oo kuwa aan guriga ka keeneen waji hurdo our? kuwa wax idin saaray sida muraayadaha in xannibi baxay iftiin oo dhan, waxaad kala garanaysaan? Waxaad ma arkaan wax laakiin gudcur.
Hadda waxa dhici lahaa haddii halkii koob 3D waxaan saaray waji hurdo ah? Waxaan ka maqnaan lahaa movie oo dhan. Laakiin tan iyo markii aan saaray kuwa muraayadaha 3D waxa uu ahaa mid cajiib ah. Waxa ay ahayd sidii aan ku jiray filimka. Waxaan la cabniinkayga hoos u haysta si ay u ma sabeyn ilaa hawada. Stuff ahaa nagu wareegsan. Stuff imanayo naga at. muraayadaha keenay waayo-aragnimo in nolosha.
Miyaan ka yeeleynaa Ilaah oo sida uu isku dayayaa in uu inoo gacanta maaskaro in hurdo filimada ee, marka dhab ahaantii waxa uu isku dayayaa in uu inoo gacanta ku ookiyaale 3D. Ma uu isku dayaya inay hor istaagaan farxad, oo naga tegin mugdi ah. Waxa uu doonayaa noo farxad in la wanaajiyey oo ay ka dhergaan. Waxa uu doonayaa na in ay helaan nolol sida ay la micno ahaa in la riyaaqay. Waxaa wax laga xumaado waxaan had iyo jeer ma aqaano waxa u eg.
Our dhibaato waa aan ka yar tahay dareen ah in xiiso macnaheedu samaynayaan wax kasta oo aan dareemayaa in la joogo wax kasta oo la siiyo. Laakiin haddii aynu si dhab ah u maleynayaa in ku saabsan, oo dhan oo naga mid ah la ogaado in fikrad xun. Yaa doonaya inuu ahaado Addoon in ay wax walba oo ay dareemaan sida samaynaya? Waxaan nahay yeelsiiyeen.
Wiilkaygiiyow doonayo inuu ku baashaalo oo uu u maleeyo inuu fartiisa dusin in outlet ah waa habka ugu fiican in la sameeyo in. Wuxuu iga baahan yahay Hanuun. Oo haddii wiilkayga waxaa laga sugayaa inay leeyihiin xiiso leh halkii dhimanayaan waxa uu leeyahay in uu i aamini. Wuxu qabaa, hoos u socda jaranjarada u muuqda xiiso leh. Laakiin sida qof weyn, Waan ogahay in uusan si fiican u socdaan oo wuxuu ku dhicid doonaa.
Ilaah waa abuuraha nolosha wuxuuna ogyahay. Waxaan oo dhan qirayaa in aynu ku jirno oo dhan ma og. Waxaa jira waxyaabo aan fahmi weydo. Oo maxaa yeelay, waxaannu dembilayaasha tahay, waxaan qiimeeyo waxyaalihii khalad. Waxaan leeyihiin in ay ku kalsoon tahay Ilaah iyo dabeecaddiisa.
dadka qaar ayaa u malaynaya, "In codadka fiican laakiin Ilaah leeyahay oo dhan kuwa amarradiisa in noo sheegto ma tahay inaan sameeyo waxyaalo xiiso leh." Oo waxaad xaq tahay; waxaa jira amarrada in Saalax laga soo waxyaabaha qaarkood. Laakiin waa si aannu xiiso leh la dumay doonaa?
Taasi ii keena aan jawaab labaad su'aashan. Christian a ma noqdo macnaheedu dhamaadka of my xiiso leh? jawaab labaad My waa: Mararka qaarkood.
II. Mararka qaarkood – Ciise Kadib Dhigan doonaa End of Qaar ka mid ah Our Fun
Ma rabtaa in aad khiyaanayn. Noqoshada Christian a jeedaa in aad doonaa leedahay inaad naftaada u diidi. Waxaa jira waxyaabo aad jeceshahay in ay yihiin shar idiin ah, wax mustaqbalka fog wax xadin farxad halkii siinaya.
Sakhraannimo muuqataa xiiso leh, laakiin waxay keenaysaa in go'aamada doqon. Sex guurka ka hor muuqataa xiiso leh, laakiin heerka in qoto dheer oo xiriir qoto dheer la marna loogu tala galay in lagu diirsaday ka go'an tahay in nolosha Ilaah ka yar marka laga reebo. Waa sida ugu qotada dheer iska aad naftaada ku siin kara qof kale. Mararka qaar been u muuqataa sida ay keenaysaa in ay xiiso leh laakiin waxa ay noo iyo dadka kale ee u dhimeeyso.
Sida aan horay u qiray, Ilaah wuxuu abuuray dhammaan nolosha iyo Waxa uu ogyahay sida uu u malaynayay in la riyaaqay. amarradiisa yihiin aannu wanaaggayaga aawadiis. At Gacantiisa midig nimco weligeedba. Oo markii aannu ka sakow, waxa aan ka farxad run iska dhaqaaqin. Eebana ma na ilaaliyo nolosha wanaagsan; annaga qudhayadu ilaaliyo nolosha wanaagsan marka aan ka sakow.
Oo fal jecel Ciise ina soo waco si ay u diidi nafteena.
Oo isna wuxuu kulligood ku yidhi, "Haddii qof aan iga daba iman lahaa, ha dayriyo doonistiisa, iyo ilaa iskutallaabtiisana maalin walba qaataan, oo i soo raac. " (Luke 9:23)
Maxay ka dhigan tahay in aad naftaada u diidi? naftaada diido waxay ka dhigan tahay ku yidhi ma naftaada si. naftaada Diidmada. Diididda waxa aad si dabiici ah rabaan in ay sameeyaan.
Tani ma dhawaajiyaan fiican iyo qalafsaneyn. u badan tahay in aanad gelin lahaa in kaadhka astaamaha a. Tani ma aha mid aad u dhiirri gelinaya in xertii. Ma Ciise kaliya isagoo gacanta oo macnaheedu iyo aflagaado?
Haddii aan qummanahay, na waydiinaya in la diido nafteena u noqon lahaa doqonimo. Haddii aan had iyo jeer ahaayeen wanaagsan oo xigmad leh noo weydiinaya in ay diidi nafteena u noqon lahaa yaab leh. Laakiin haddii aynu nahay cilladaysan noo weydiinaya in ay diidi nafteena jecel. Haddii aan labadaas nadhumiyey oo waayey ilaa, na waydiinaya in la diido nafteena waa waxtar leh.
Waxaad had iyo jeer ma naftaada aamini karaan. Waxaa jira waxyaabo aad jeceshahay in ay yihiin shar idiin ah. Imisa jeer baad sameeyey go'aanada in u muuqday xiiso leh, laakiin waxaad u lahaa in ay ka dib la cawaaqibka ka qaban?
Ciise waxa uu ku yidhi hadii aad rabto in aad i soo raac, aad leedahay si aad joojisid in aad adiga soo socda. Waa sida weydiinaya qof jihooyinka. Haddii aad ogaato inaad soo jidka qaldan, oo aad weydiiso qof in ay ku caawiyaan, ma waxaad kala socon kartaa adiga oo jidka socday. Ka dib markii Ciise waxa uu ka mid bukaanka dareen ah in aad laga badiyay oo ay u baahan yihiin qof ku toosiyo. Markaasaa Ciise ku yidhi waa la, ha tago. i sii isteerinka. Waxaad adigu i siiyey. Waxaan ahay Master ah. Waxaan ahay Hoggaamiyaha. Tani waa waxa ay la micno tahay inuu iga daba yimaado.
Haddii aan afadiisii ​​waxay ku tidhi, haddii aad rabto inaad ninkaygii ahaan aad u leedahay in aad naftaada u diidi oo i soo raac. Waxaan noqon lahaa sida huh? Haddii wiilkayga ayaa sheegay in… Xaqiiqdii waxaan noqon lahaa yaabay tan iyo markii uu ma hadli kartaa. Haddii Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in, Waan ku diidi lahaa. Xitaa haddii aan wadaad ayaa sheegay in, naftaada u diidi iyo samayno wax kasta waxaan idinku leeyahay iyadoo aan loo eegayn waxa ay tahay, Waxaan kaniisadda kale tegi lahaa. maxaad? Maxaa yeelay, waxaan aadan rabin in la siiyo kelyaha ee noloshayda si buuxda u taliya qof kale dembi badan. Taasi waa doqonimo. Waxa aanu i caawin. Waxay noloshayda ma keeni kartaa si fiican ha ahaato. Waxay leeyihiin arrimaha iyaga u gaar ah.
Laakiin Ciise Masiix ma aha qof kale dembi badan. Waxa uu quduuska ah, Waxa uu i abuuray, oo sidaas dembilayaasha laga yaabaa in Ilaah inagula heshiiyey uu ku dhintay. Waxa uu aamini karo. Wuxuu ogyahay Eebe waxa noloshayda waa u eg. Waxa uu aan celceliska, Waxa uu i jecel. In Christian ah oo macnaheedu yahay in aad kor u saxiixi in la yidhaahdo ma naftaada in mararka qaarkood.
Haddii aadan ku yidhi tahay ma naftaada si joogto ah, waa in aad naftaada weydii haddii aad runtii Ciise socda. Maxaa yeelay, waxaan ku qaldan tahay si joogto ah oo aan u baahanahay Gargaarkiisa.
Mid ka mid ah buugaagta realest in Qorniinku waa kitaabkii Ecclesiastes. Waxaa laga yaabaa in uu qoray Sulaymaan. In waxa, wuxuu ka hadlayaa oo ku saabsan sida wax walba waa macno. Tan iyo markii uu lahaa wax badan oo wax walba oo, uu ka waayo-aragnimo ku hadla. Halkan waxa uu sheegay in.
"Waxa uu jecel lacag ma noqon doonto qanacsan lacag." (Ecclesiastes 5:10)
Oo sidaas waa inaad this qaadan karto, sida halkan waxaan tagaan. Way neceb yihiin wax walba oo, oo ay ku jiraan lacag. Eebana ma doonaysaan inaan ku riyaaqaan. Ama waxaad ku arki karin sida Ilaah aad ka ilaalinaya dabagalka wax marna aad ka dhergin doonaa
Dhegayso waxa uu sheegay in ka dib:
Qof kasta oo sidoo kale oo Ilaah siiyey maal iyo hanti iyo xoog si ay u raaxaysan, iyo in ay aqbalaan uu wax badan oo ku rayrayn hawshayadii this-waa hadiyadda Ilaah. Waayo, isagu aad uma xusuusan doono wakhtigii uu noolaa maxaa yeelay, Ilaah isaga haysto farxad leh qalbigiisa ka. (Ecclesiastes 5:19-20)
Ma in khilaaf ah? Ku raaxayso lacag? Waxaan u maleynayay inuu ku yidhi ma waxaad ka dhergin doonaa. Ilaah siinayaa farxad, lacag. Money ma aadan ka dhergin, waxa kaliya ka dhigaysa aad rabto in aad lacag dheeraad ah. Waa carrabka ku nool, waxaa ka. Waxaad ku raaxaysan karaan wax, iyada oo aan hoos siday maleeyeen been ah in ay ka dhergin doonaa naftaada nool. Ilaah waxa uu isku dayayaa in ay na ilaaliyo.
Our dhibaato waa in aan dooneyno in aan ku caabudi hadiyadda halkii nooleyn ah, Abuurkii halkii abuuraha. Waxaan rabnaa in aan caabudi shiraac ah halkii rinjiile, bogagga halkii qoraaga. Waxaan rabnaa in aan ka daba tegin lacag halkii kan wax walba siisaa. Markaasaa Ciise ina soo waco in la diido in isaga raac.
Masiixiyiintu waa lama ganacsanayo xiiso for xiiso, ama farxad murug. Waxay tahay Ganacsi farxadaha ku meel gaar ah, waayo farxadaha weligeed ah. Waxay tahay Ganacsi farxadaha dilaaga ah, waayo farxadaha naf. Waxay tahay Ganacsi Dagdagaysa, farxadaha yeelsiiyeen, waayo deggan, rock farxadaha adag.
III. Sidee Waxaan Ku raaxayso Waxyaabaha hagaagsan?
Waxaan ku noolahay rumaysadka noo abuuray.
Waxaan ku noolahay rumaysadka All
Haddii aan oga ama ma, oo dhan oo naga mid ah waa dad ka mid ah iimaanka. qabka kasta aadanaha. Masiixiyiinta ah, Muslimiinta, Lahore, budista, Agnostics, Cawaan-dhan oo naga mid ah ku noolahay rumaysadka, waxaan ku nool nahay light of waxa aan rumaysan nahay in daqiiqad kasta siiyey. Kuwa idinka mid ah waa ciyaartoyda ku dhaqmaan runtii adag. maxaad? Maxaa yeelay, aad aaminsan tahay waxa aad ka dhigi doonaa fiican ee aad cayaaraha. Ama qof sidee ku saabsan this? Qaar ka mid ah oo idinka mid ah ku riday cinwaanka in Maps Google si aad u hesho meelaha. maxaad? Waayo, waxaad rumeysan yahay in aad telefoon ku siin lahaa tilmaamaha xaq u. Haddii aad rumeysan telefoonka kugu khayaanaan lahaa, oo waxaan u malaynayaa in mararka qaar anigaa sameeya, aadan lahaa ayaa waxa loo isticmaalaa. Waxaan on iyo tegi karin. Laakiin dhammaanteen innagoo aan ku noolahay rumaysadka.
Waxaan qabaa in nolosha wanaagsan soo bixin waa nool rumaysadka Ilaah wanaagsan. Waxa uu inoo sheegayaa sida aad u raaxaysan uu abuuray unbaa. Wuxuu nagu keenaysaa in farxad.
waqti kasta oo aan lagu daweeyo sida dhammeeyey wax aan ka ahayn Ilaah laftiisa in aan ma sax ku riyaaqayaa.
Fun ayaa Aan ku filan
Laakiin waxaa laga yaabaa in aad u malaynayso in, Anigu ma rabo in. Waxaan doonayaa inaan ku baashaalo. In ku shuqloonyihiin Nicmo, naftaada ku riyaaqayaa ma aha oo dhan nolosha ku saabsan waxaa loo. Haddii aad u maleyso inay tahay, aad tahay in wax cabsi. Haddii aad dhisayso noloshaada aasaaskii oo xiiso leh, waxaa soo hoos doonaa giringiratay marka noloshu adag. Fun, la shuqloonyihiin Nicmo, hadda naftaada ku riyaaqayaa kuma filna. Waa maxay sababta aan dib markii farxad weligeed ah?
Oo ma ahan ku filan in ay sugaan ilaa ka dib. Maxaad sugaan si ay u bilaabaan nool? Jooji ceyrsaneysa wax la been abuur ah iyo bilaabaan ceyrsaneysa wax dhabta ah.
Waa sida tiray NBA, maxaa yeelay, waxaad halkii ciyaari lahaa NBA 2k on PlayStation. Jooji ceyrsaneysa wax la been abuur ah, iyo isku duubtid wax dhabta ah in la heli karo. C.S. Lewis muujiyeen dareen la mid ah markii uu sheegay in this:
“Waxaan nahay xayawaan qeybtii qallafsan li'ida sakhraamo iyo galmada iyo hamiga markii farxad aan la koobi karayn baa nagu bixiyeen, sida ilmaha Jaahiliinta oo doonaya in uu tago on samaynta naan dhoobo raranta ah, maxaa yeelay, isagu ma qiyaasi kartaa waxa loola jeedo dalab ee fasax ah ee badda. Waxaan nahay aad si fudud ku faraxsan” - C.S. Lewis, Culayska ee ka Nasahanyahay
Waxaan qabaa in nolosha ahaa, kuwaas oo dhan ku farxi lahaa Dagdagaysa isticmaalo. Markaas waxaan noqday Christian a. Waxaa jiray wax aan akhriyey hore sida isagoo Masiixi ah in duminayo aan sawir jir ah oo nolosha wanaagsan. Halkan tusaale.
All oo naga mid ah ayaa wuxuu maqlay dadkii oo ka hadlaan geerida waqti ka waqti. Waxaan maqlay dadkii odhan, "Waxba nolosha waa aamin, dhimasho mooyaane, iyo canshuur."Mid ka mid ah heesaa caan ah ayaa sheegay in, "Waxaan isku dayayaa inaan ku garaacday nolosha sabab uma aan khiyaameeyaan kartaa dhimasho." Dadka fahamsanahay in dhimashada aan la baajin karin. Laakiin sida da'da yar Christian a, Waxaan akhriyey aayaddan ku saabsan dhimashada ee Kitaabka Quduuska ah in ay ahayd sida wax aan abid maqlay hor. Rasuul Bawlos wuxuu la hadlay oo ku saabsan dhimashada hab la yaab leh. Bawlos oo kaliya ma dhihi dhimashada dhawr, uu tallaabo dheeraad ah ku qaatay. Waxa uu sheegay in, "Dhimashaduna waa faa'iido." Waa maxay!?
Dhimashada waa marka aad maskaxda, qalbigaaga, iyo sambabadaada joojiyaan shaqadooda. Dhimashada ka dhigan gabagabeeyo nolosha iyo kala xubnaha qoyska. Dhimashada ka dhigan tahay shaqo aad nolosha ka weyn tahay. Si ka duwan tijaabooyin kale, dhimashada waa, qofka dhinto, macno ahaan "dhamaadka dunida"– dhamaadka this mid kasta. Sidaas sida dhimashada suurto gal noqon karaa faa'iido? Waxaan lacag ma ka dhigi kartaa markii aan dhiman? Anigu ma kordhin kartaa xaaladda aan markii aan dhiman. Waxa kaliya ma ku haboon la views my jir ah oo nolosha wanaagsan.
Well si hagaagsan ha iigu in la fahmo waxa loola jeedo Paul, kuwaas oo afar erey-dhimashaduna waa ii faa'iido-Waxaan u lahaa in ay fahmaan in afar xaq u timid iyaga waxaa u horreeyey. In Philippians 1 Paul sharaxayaa sababta uu u muuqataa in ay ok la mid sii joogi nool ama u dhimanayaan at gacmaha silcinaya uu. Waxa uu ku qoray aayadda 21, "Si aad ku nooshahay WAA Masiix. "Iyada oo erayada kuwa, Rasuulka ii sheegay waxa nolosha runtii waa dhan oo ku saabsan- lacag, shaqadeyda ma, xitaa ma qoyska- laakiin Ciise. Sidee is-xuddun yaabaa, xaaladda-Waali aragtida soo socda si dhab ah in ay u noolaadaan?
Life leeyahay macnaha lahayn marka laga reebo Masiix, maxaa yeelay, Masiix yahay waxa ay tahay oo dhan oo ku saabsan. Sidaa darteed inay ku raaxaystaan ​​wax unbaa, waxaan ku khasbannahay in iyaga raaxaystaan ​​hab u marag u furo runta in.
Wax walba waa ka wanaagsan marka riyaaqay ee macnaha guud ee ay la micno ahaa inuu noqdo. Markii aan lagu daweeyo wax la mid ah dhamaadka ah laftiisa waa khalad. iyaga waa waxaan iyada oo loo adeegsanayo in dhamaadka ammaanta Ilaah.
Ma habboon tahay in aan kaliya galmo la dumarka badan intii suurto gal? Ama xitaa kaliya ku alla kii aad tahay in xiriir dhow la leh? Sex Waxaa fiican ku riyaaqay in axdi guur. Laba qof ka go'an in ay ka mid kale oo inta ka dhiman noloshooda, uusan meelna. Waxaa uma baahna amni, ceeb lahayn. Saaxiibtinimada waxaa fiican ku riyaaqay macnaha. Waxaa jira is-hoosaysiinta, dhaaf, nimcadii, jeclahay.
Lacagta waxaa fiican ku riyaaqay marka aan la caabuday. Power waxaa fiican ku riyaaqay marka aan la caabuday. Maxaa dhacaya marka ay iska tagaa? Khamri si dhexdhexaad ah waa ka wanaagsan yahay sakhraannimo. Oo dabcan f aad ku raaxaysan karaan heeso iyo filimaan. Laakiin ka feker sida ay ula xidhiidhaan isku macnaha ah oo dhan nolosha: Masiix. Wax walba waxaa fiican ku riyaaqay markii uu soo gudbiyey ay ka Masiix.
Waxaan jebisay, oo Masiixa u yimaadeen inay na dib isugu. Marka waxaan ku sujuudi lacag, ama saaxiibtinimo, ama galmada, waa dembi in Ilaah. Oo annaguna waxaannu u qalmaan in la ii xukumo dembiyada kuwa. Laakiin Ilaah wuxuu soo diray Masiixa. Ciise ma qabto dhibaato la riyaaqayaa waxyaalaha qaldan, ama ku riyaaqayaa wax wanaagsan jidka dembi leh. Laakiin Ciise qaaday ciqaabta xadgudubkeenna aawadiis iskutallaabta. Waxa uu ka qabriga kacay oo ku yaboohaya nolosha weligeed ah.
Haddii aan siyaabo noo jir gadaashiisa kaga tegi doonaa oo cuslaataan ayaynu Masiix waa la cafiyi karaa, oo waxaan geli karto in si farxad u ah Sayidkeenna. Waxaan hadda ma noolaan doonnaa nolol fiican. Laakiin wuxuu na siin doonaa farxad iyo farxad weligeedba.
Victor • October 24, 2013 at 2:17 pm • Reply
Triggz • October 24, 2013 at 4:36 pm • Reply
Wow!aad xaqiiqdii tahay weel Ilaah brah,oo igu kalsoon tahay oo aad loo Waxyoodo badan oo la isku hallaynina, iyo iimaanka xagga posts God.these runtii i bedelay hab ballaaran oo waanan rajaynayaa inaad sii qoraal noo aawadood oo naga mid ah all.One maalin waxaan doonayaa inaan xaq aad sida,(Waan ogahay in aan ka dhawaajin sida jir ah 6year)sababta aan hore u wareegay aan Rap iyo Poetry inay sabab Christian in waxa aan hadda ku nool ahay,si ay kuwan raadkaygay sida Bal eega mahad RUUXA iyo sinta HOP.stay barakaysan
Dawg iyo hay Faith 116!
Deondre • October 24, 2013 at 4:41 pm • Reply
Ma u baahan tahay inuu ka tago Bro comment ah i rumeeyey oo idinka soo bixiyey faham cad inay ahu listener.May ay sii wadi inuu idin barakeeyo ee meel walba oo ka mid ah noloshaada Magaca Ciise…
Maurice • October 24, 2013 at 4:51 pm • Reply
Taasi furitaanka dhab ah maanka. Waxaan Ilaah eraygii aad la wadaago mahad.
Geordan • October 24, 2013 at 5:09 pm • Reply
Markii uu ka hadlay “Cheesey Christian Music” Waan ku soo dillaac, lol. Mahadsanid , Trip.
Christian Cole • October 24, 2013 at 5:11 pm • Reply
Tani waa sida post cabsi! Thanks for erayada iyo waxyoonay, Trip! Iyagu ma maqal.
Jessie • October 24, 2013 at 5:17 pm • Reply
Aad u fiican u sheegay. Mahadsanid, Ruuxa Ruuxa, waayo hadlayay XAQIIQDA in this weel diyaar. AWESOMENESS..
BrookeMeghan • October 24, 2013 at 5:24 pm • Reply
Aamiin! Waad ku mahadsan tahay qaybsiga iyo dhiirigelinta.
“Si aad nolosha ii ah Masiixa, oo dhimashaduna waa ii faa'iido.” Filiboy 1:21 – Sayidow, Waxaa laga yaabaa in si dhab ah aan this out ku nool nolosheena! Waxaad ku mahadsan tahay xoriyadda waxaan leenahay in aad ku.
Yeremyaah • October 24, 2013 at 5:25 pm • Reply
this Reading ahaa sida i maqlaayay
khudbada , Its weyn ,, Ku faana !!!!!
Kaaleeb • October 24, 2013 at 5:49 pm • Reply
walax Good Mr. Lee.
Shaunda • October 24, 2013 at 7:04 pm • Reply
persepective Cade on ujeedada farxad iyo farxad nolosheena. Runtii riyaaqay sida aad daro quote in ka C.S. Lewis ku tilmaamayaa in ilmaha la mudpies ciyaaro. Waxaan nolosha si buuxda sida Masiixiyiintu u raaxaysan karaan!
MasiyaChoice • October 24, 2013 at 11:16 pm • Reply
Haa runtii dhimashaduna waa in ay helaan. Masiixu wuxuu u dhintay si aynu ugu noolaanno oo aan waajibka ku ah inay ku nool yihiin isaga, waayo,. Sida dadka dhallinyarada ah aynu dhiman ku waari doonaan nimco adduunyo iyo nool yahay oo khasnadaha jannada.
STEPH • October 25, 2013 at 12:38 waxaan ahay • Reply
Waxaan mahad Trip blog Lee. Waxaan la this badan ku dhibtooday halka waxaan ku jiray dugsiga sare, xataa waqtiyada hadda halka in kulliyadda…kaliya isku dayaya si ay u fahmaan sida ay u raaxaystaan ​​wax hab in ka marag furaa in Ciise yahay wax walba iyo waxa u eg degganaa oo ka yimid. Waad ku mahadsan tahay mar kale.
MotsiriLebea • October 25, 2013 at 5:34 waxaan ahay • Reply
Wow. Waxaan ahay hadalla'aan. Sida runtii ? Waxaan ula jeedaa, waxaan ku fikiray si aan u helay in ay myslef beddesho ka hor waxaan u imid inaan Masiix laakiin ahaa kuwa Daalimiinta ah.
Yuri • October 25, 2013 at 9:19 pm • Reply
walax Awesome! Lay siiyo fariin cibaadaysiga in wiilasha dhalinyaro ah oo Isbuucaan ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay in ay noqon sanco Ilaah. Kuwani waxay leedahay dhibcood weyn inaan doono cover u badan tahay iyaga la mid aad u.
Kiara • October 26, 2013 at 7:04 pm • Reply
post Tani waa duco run.
Chase • October 28, 2013 at 3:52 pm • Reply
fariin Great, Trip. Ka dhig on isagoo nuurka u ah in dunida gudcurka ah, halkaas oo inta badan ee deynta & warbaahinta isku dayaan in ay sii Masiix out of walba oo macquul ah. dadka Good, badbaadiyey, Dhiiggiisu, mar walba ku guuleysan doono in dhamaadka!
Shauneil • October 28, 2013 at 5:16 pm • Reply
harbeegail • October 28, 2013 at 5:19 pm • Reply
waa waxaan idinku leeyahay… Tani waa farriin ka yimid Ilaah. Waxaan talkd ku saabsan shalay this iyada oo yaraantaydii la shaqayn jiray, wayna i arkay sida la nacay. Waxaan dareemayaa diirsaday oo strenghtened la this hadda. No dib u socday… weligiis ciise. More ee Bro nimcada Ilaah ee.
Ricky Urdun • October 29, 2013 at 2:26 waxaan ahay • Reply
Tani waa Trip dhabta ah barako. Ka dhig ka shaqeeya, waayo, boqortooyada.
Uche • October 29, 2013 at 3:16 waxaan ahay • Reply
Mid ka mid ah erayga 'wow!!!’
Ceynaan • October 29, 2013 at 8:43 pm • Reply
Ku mahadsan tahay in aad Bro. runtii waxaan this loo baahan yahay. Sida a dhallintaada Christian dhalinyaro ah, Waxaan inta badan ka heleen fasiraadda khalad ah, waa maxay farxadda iyo madadaalo waa. Laakiin ka dib markii this reading, Waxaan dareemayaa sida aan fahamsanahay in yar ka fiican. runtii waxaan this mahad. Thanks mar kale, Ilaah aad iyo qoyska barakeeyo. aad jeclaada in Ciise…
Elvis • October 29, 2013 at 11:16 pm • Reply
Faraxsanahay waayo waxa aad la sameynayo la website this iyo kaniisadda maxalliga ah…inta badan ku faraxsan waxaan ahay for arkaya u dib istuudiyaha…Waxaan ahay juiced waayo waxa u ku soo socda
Lewis unelle doonaa • October 30, 2013 at 8:11 waxaan ahay • Reply
Tani waxa ay ahayd farriin qurxoon, waxay u adeegi aniga iyo aad baad u mahadsan tahay hadalka ku saabsan Qorniinku aayadda Phillipians 1:21. Waxaan isku dayaya dhowr jeer si ay u fahmaan oo ay dhagaystaan ​​khudbadaha. Waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay sii socoto in aad isticmaasho si kor loogu qaado iyo in la dhiso on-boqortooyada. Ilaahay ha barakeeyo aad Bro.. Peace & jecel ♡
DavidMoyo • November 1, 2013 at 8:01 waxaan ahay • Reply
Tani waa cabsi badan William, run ahaantii mahad aad transperancy iyo humily aad si aad naftaada u oggolaan in loo isticmaalo Rabbiga. Ilaah ha idiin barakeeyo
Marjorie • November 1, 2013 at 7:22 pm • Reply
Tani iyo qaar badan oo kale oo farriimo on blog this waa xaq on time & on dhibcood! Rabbiga ammaana! Waad ku mahadsan tahay qaadashada blog this, Waxaan ahay mar walba sidaas ku dhiirri-galiyay in Rabbiga by posts aad. Fadlan sii hadlaya iyo qoraalka! Ilaah adiga iyo qoyskaaga barakeeyo!
Jennifer • November 15, 2013 at 7:29 pm • Reply
Wow! Warkani runtii ila hadlay! Waad ku mahadsan tahay wax badan, waayo wixii aad samayn waayo, Ilaah iyo In unashamed ee Injiilka. Sidoo kale, waayo, Ilaah daynin gacanta ee noloshaada. Ilaah hayn karaa adiga iyo qoyskaaga la yaab leh barakaynayay!
Waxaad tahay sida barako weyn nolosheyda!
Endy • January 19, 2014 at 5:27 pm • Reply
wow!! Balse ilaa iyo haatan this, this kinda furan waxaan tho't,interestin,macquul masiixiyad waxaa jst khayaali sida i ka buugaag #Francinerivers akhri. Ii dhiman erayada inaannu wax nidhaahno. piece Tani ayaa runtii wax taabtay igu jira oo hadda ahay diyaar 100% in ay ku noolaadaan for God..thanks TL..God caawiyo in aad si ay u sii isagoo barako. #Aamiin!
Michael • January 29, 2014 at 1:35 pm • Reply
post Great, i runtii jeclaa shaxanka.
Haddii aan si dhab ah u badbaadiyey, oo Ilaah wuxuu abuuray noo qalbi nadiif ah oo cusub, amarradiisa ma noqon doonto greivous. (1John)
Ha heli qaldan igu, waxaan weli u baahan cilmiga, laakiin haddii aan la badbaadiyey waxaa jira waxyaabo aan rabin doonaa inay sameeyaan. Duufsado weli waxaa iman doona shaki ku jirin, laakiin Ilaah ma noo oggolaanaysaa in aan la isku dayay kor ku xusan waxa aan dhali karin. Waxa uu abuuri doonaa baxsado.
Josh • February 17, 2014 at 2:48 pm • Reply
Safar this la yaab leh! Waad ku mahadsan tahay si ka badan! Waan jeclahay wacdiyada aad, waxay i ogaadeen xaqiiqdii maxaynu haysannaa Ilaah wanaagsan. Ku mahadsan tahay in aad Bro! hawsha wanaagsan ee Hayso.
waxaan ahay 17 sano jir ah, oo waxaan uun Ilaah aqoon ayaa mustaqbalka la yaab dhigay hoos ii.
Waxaan sidoo kale doonayaa inuu caddeeyo in aad khudbadiisa waxa ku qoran. Waxaad halmaamay warqad lol “OF” aad ku qoray “f” lol Just qabtay indhahaygu in dhammaan ay. Waa meesha
aad ayaa sheegay in:
“… Oo dabcan f aad ku raaxaysan karaan heeso iyo filimaan. Laakiin ka feker sida ay ula xidhiidhaan isku macnaha ah oo dhan nolosha: Masiix. Wax walba waxaa fiican ku riyaaqay markii uu soo gudbiyey ay ka Masiix.”
Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo wax badan oo! Ku mahadsan tahay in aad Bro!
Galactic • October 19, 2014 at 12:13 waxaan ahay • Reply
hi, wax walba waa la xunna halkan ka socda iyo ofcourse mid kasta waxaa wadaaga macluumaadka, in ay si dhab ah u wanaagsan, sii qoraal.
Justin • October 29, 2014 at 9:57 pm • Reply
Wow waxaad tahay qoraa cajiib ah oo macallin! Habka kaas oo aad wax ku wacdiyo Injiilka waa sidaas Nuurin. Waxaan maqli kari waayeen inay wuuna akhriyey wacdiyada aad maalintii oo dhan! Waxay yihiin cunto run naftiisa. Ilaah adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo!
Olobz • December 1, 2014 at 5:56 pm • Reply
wanaagsan nin wanaagsan Good mid.
Your model fiican iyo waxyoonay. Waxaan rajeynayaa inaan dhammuna waxay wada arki Jannada, markaas ka dibna kaliya oo aan gabyi karaa 'Sweet Victory’ ee waxaa ay buuxnaanta. Waayo, hadda Ilaahay ha barakeeyo
Keaton • February 22, 2015 at 12:28 waxaan ahay • Reply
Bro, Waxaan aad u bogi dheeraad ah sida wax wacdiya badan muusikiiste ah iyo inaad tahay heesaa aan jeclaa. Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa fursad ay ku hadasho on wasiir si sal wasaaraha. run ahaantii aad qalbigiinna oo waan jeclahay isaga, waayo,. Haddii aan laga yaabaa, Uma maleynayo in uu ku siiyo ilaa music 100%. Waxaan ay rumaysan boosteejo ah oo ahu uu idin siiyey in midkeenba midka quduusiinta iyo aaso dembilaha. Waan ku baryayaaye, waxaad awoodi doontaa inaad heshiisiiyo hammadda waan ogahay aad si fiican inaad daajisaan dadka Ilaah iyo hadiyado muusikada aad cajiib tahay. Ilaah ha idiin barakeeyo walaalkiis gacaliyo!
tamsyn • December 28, 2015 at 2:45 pm • Reply
naftiinna ayaa si muhiim ah in Ilaah waa! Oo wow markii aan u arkaan tiirarka badan oo waxaan ahay waxay ka cabsan shaqada Ilaah samaynayo aad loo marayo. Its la yaab leh. Ka dhig ku hayo on. Barakayn abuur kasta oo Ilaah biyaha aad loo isticmaalo in ay kala eryaan on Earth uu u qurux badan. Oo wuxuu u bixi karaa oo qandaraas ah oo dhan abuur ah.